အမှန်တကယ်တတ်မြောက်ဖို့ EVER UP COLLEGE မှသင်ကြားပေးမည်။ သင့်ဘက်က ကြိုးစားဖို့သာလိုပါသည်။
ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားသူများ / အောင်မြင်ပြီးသူများ
GCE O/AS/A Level ဖြေဆိုထားသူများ / အောင်မြင်ပြီးသူများ
EVER UP COLLEGE တွင်အားဖြည့်သင်ကြားပေးမည့် Foundation (Pre University Programme) သည် မိဘများ၏ကျောင်းသား/သူများအတွက် အခြေခံကောင်းရရှိရန် နှင့် ပညာသင်ကာလတလျှောက်ကိုယ်ပိုင်အစွမ်း အစဖြင့်တက္ကသိုလ်ပညာရေးတွင်အဆင့်အတန်းရှိရှိ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများနှင့်ရင်ဘောင်တန်း၍ သင်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍စနစ်တကျရေးဆွဲဖွဲ့စည်းထားပြီး နာရီ (၇၀) ကြာအချိန်ပို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ EVER UP COLLEGE ၏“Certificate in Business Management Foundation” လက်မှတ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းစမည့်ရက် - စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်
Wednesday (2pm – 4pm)
Thursday (1pm - 3pm)
Friday (1pm - 4pm)
ABE (UK Qualification) Regulated by RQF
2018' December Intake အတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီ။
December 15, 2018 အတန်းများစမည်။
Special Promotion for ABE Management Diploma classes....
400,000 ks per subject
Get 5% discount after end of November 2018 (at least3subjects enroll)
အမှတ် (၂၉) ၊ လှည်းတန်းလမ်း (အောက်ဘလောက်) ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း -၀၉ ၄၄၄ ၇၇၇ ၉၀၁ ၊ ၀၉ ၄၄၄ ၇၇၇ ၉၀၂ ၊ ၀၉ ၄၄၄ ၇၇၇ ၉၀၃
“ Diploma in HRM ”
လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ Professional Diploma
သင်တန်းကြေး - ယခင် 400,000 ks, ယခု 240,000 ks
တစ်လ ၈ သောင်းကျပ် ဖြင့် ၃ ကြိမ် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
၃+၁ အစီအစဉ်အနေဖြင့် ၃ ယောက်တက်လျှင် ၄ ယောက်မြောက်သင်တန်းသား FREE
သင်တန်းစမည့်နေ့ - ၁၆ ရက် ၊ စက်တင်ဘာလ
သင်တန်းချိန် : EVERY SUNDAY (9am – 12pm)
သင်တန်းစမည့်ရက်း9th September, 2018
Exam Fees : 129 GBP + 30000 ks
International Qualification Network ( IQN) မှ ပေးအပ်သော SCQF Level7အဆင့်ရှိသော Diploma ဖြစ်သည်။
မိမိဘဝတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေကြပြီးအချိန်ရှားပါးသော ဝန်ထမ်းများ ၊ အရာရှိများ၊ မန်နေဂျာ များ၊ မိမိဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးတိုးတက်လာစေရန်အကဲဖြတ်အကြံပေးလိုသောလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် HR နယ်ပယ်တွင်ရာထူးတစ်ခုဖြင့်အလုပ်လုပ်လိုသူများ၊ HR ပညာရပ် ကိုစိတ်ဝင် စား၍စတင်လေ့လာလိုသူ များ ၊ HR ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းပြောင်းလိုသူများ၊ အတွက် အခက်အခဲအနည်းဆုံးဖြင့် HRM ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးတက်ရောက်ဖြေဆိုရုံမျှဖြင့် SCQF အရည်အသွေး အာမခံချက်ရရှိထားသော လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ Diploma in HRM (IQN-UK) ကို EVER UP College တွင်ရယူနိုင်ပါပြီ။
အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်… PH: 09 444777901 ~ 903
EVER UP College: No.29, Hledan Street, Lowest block, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင် (Top Paper Prize) - 2013
မအိမ့်မြတ်သဉ္ဇာ - BBM (December 2013 Examination Session – ABE UK QCF Level 5)
ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင် (Top Paper Prize) - 2014
မမိုးသင်းချို - Medical Student (December 2014 Examination Session – ABE UK QCF Level 5)
Copyright © 2021 Ever UP College. All Rights Reserved. Developed by DMYANMAR